Gollaha Amaanka ee QM oo isku-raacay in ciidamada AMISOM la gaarsiiyo 17-kun,ayna ka howlgalaan gobolada koonfureed ee Soomaaliya. – Radio Daljir
Gollaha Amaanka ee QM oo isku-raacay in ciidamada AMISOM la gaarsiiyo 17-kun,ayna ka howlgalaan gobolada koonfureed ee Soomaaliya.
New York,feb 23 -Golaha Amaanka ee QM ayaa isku raacay in la kordhiyo tirada ciidamada nabadilaalinta Midowga Afrika ee ka howlgalaya Soomaaliya AMISOM, si’ay wax uga qabtaan xaaladda amni xummo ee ka jirta Soomaaliya.
Fadhi wada jir ah oo ay yeesheen 15-ka xubnood ee Golaha Amaanka ee QM ayaa waxaa ay isku raaceen in tirada ciidamada nabadilaalinta Midowga Afrika oo xiligaan ah 12-kun la gaarsiiyo ugu badnaan 17,731,gollaha ayaa sidoo kale ogolaaday ciidamada AMISOM inay tagaan guud ahaan gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya,ka hor inta aan la gaarin 31-ka bisha October.
Gollaha Amaanka ee QM ayaa intii uu socday fadhiga gaarka ah oo ay ka yeesheen xaaladda Soomaaliya,waxaa ay ka codsadeen dowladaha Afrika inay tixgaliyaan codsiga uu soo jeediyay Gollaha ee ku wajahan in ciidamado dheeraad oo wax ka qabta xaaladda Soomaaliya la kordhiyo.
Xogahayaha Guud ee QM Ban Ki-moon ayaa soo dhoweeyay go’aanka uu isku raacay Gollaha Amaanka ee QM,isagoona ku nuuxnuuxsaday ciidamo kordhinta Soomaaliya inay qayb ka tahay taageerada la siinayo dowladda faderaalka KMG ah ee Soomaliya oo dagaallo kula jirta falaagada Al-Shabaab.
Afhayeenka Mr. Ban oo gollaha Amaanka ka hor aqriyay farriin katimid xogahayaha guud ee Qm ayaa waxaa uu sidoo kale Ba Ki-moon oo ka qaybgalaya shirka London ka furmaya inuu usoo jeediyanayo hogaamiyeyaasha siyaasadda ee Soomaaliya inay dhaqan galiyaan heshiiskii Road Mapka ee lagu gaaray Muqdisho,kaasi oo horseedaya in daganaansho iyo kala dambayn dib loogu soo celiyo Soomaaliya.